Ezinụlọ Ezinụlọ - WRSP
UGBU AGBANWEE EZINỤLỌ EZINỤLỌ, 2009-PRESENT
2009 Maria (Karen Zerby) na Peter (Steven Kelly) pụtara na nzukọ CESNUR na Salt Lake City wee gụọ otu akwụkwọ nke kwupụtara n'ihu ọha na "Reboot" nke TFI.
2010 Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ụlọ ndị TFI gburugburu ụwa gbasasịrị, ndị òtù ọ bụla gbasakwara iji guzobe ezinụlọ nuklia onwe ha na ọrụ ego / ego iji kwado ha.
2010 New TFI webpage kwusara nkwenkwe ọhụrụ na Ozi Nkwupụta. Maria na Peter onwe ha ka a kọwara dịka ndị nduzi TFI wee malite ide ihe nchịkọta blọọgụ Ndị Kraịst oge niile.
Ndị òtù Board nke 2012 gbasara Nzukọ Ọha malitere izute Maria na Pita iji tụlee nsogbu TFI ugbu a na n'ọdịnihu.
Ihe ntinye 2013 Video ka Pita mere, we kpughe ka ndi mmadu mara na weebụsaịtị TFI, ichikota otutu ihe di iche iche maka ntuziaka TFI ohuru banyere nkwenkwe na atumatu.
Na mkpọtụ 2009 dị ịtụnanya ma dị egwu, ndị isi mmekọrịta Maria (Karen Zerby) na Peter (Steven Kelly), ndị nọchiri David Berg, gosipụtara n'ihu ọha na usoro mgbanwe (a na-akpọ "Reboot") site na nzukọ ahụ ga-agbaze ihe ndi choro ihe ndi ozo choro, usoro nlekota oru, na ihe ndi ozo di na TFI (Zerby na Kelly 2009; Shepherd and Shepherd 2010: 212-13). Ntughari ohuru, nke no na sayensi ndi mmadu na sayensi na ndi mmadu na-achota ya, gbara ndi mmadu TFI n'otu n'otu ume ime mkpebi nke onwe ha ma tinye aka nke ha dika ndi Kristain. A gaghị atụ anya ka ndị mmadụ na ndị na-elekọta mmadụ na ndị na-elekọta ya na-akpa àgwà ọjọọ. Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike iduzi ndụ nkịtị n'ime obodo, na-achọ agụmakwụkwọ, ma na-arụ ọrụ ego. A gaghị enye ndị òtù iwu ka ha mee mgbanwe ndị a, mana ihe bara uru bụ na, na nkwụsị nke nduzi WS na nchịkwa ndị ọzọ, ọtụtụ n'ime ha emesị mee ya.
Nsonaazụ, ihe a na-ahụ anya nke mgbanwe ndị a, mgbanwe na-enweghị isi bụ ime ka mmekọrịta ezinụlọ na ndị na-emekọ ihe ọnụ nke ndị otu ezinaụlọ bụ ndị jikọtara ọnụ na ibe ha site na njirimara nkekọrịta. Mbibi nke disiputara TFI na ngalaba nke mbu, nke ekpuchigoro nke oma, rue nke ato ya, nke putara ihe kwusiri ike ma dikwa nkpacha-ikekwe bu nchighari nke akpachapuru anya nke puru iche, n'ike na akuku ya, puru iche na akuko na-emepe mmegharị okpukpe ọhụrụ (Onye Ọzụzụ Atụrụ na Onye Ọzụzụ Atụrụ 2012).
"Reboot" emewo ka ọ dịkarịa ala hazie nkwenkwe bụ isi nke TFI ka ọ dịkarịa ala, ebe ụfọdụ ndị dị, dịka nchịkọta nke Mormonism nke oge a bụ otu ihe dị mkpa nke alụmdi na nwunye di iche iche nke oge a, na-adabere na ọdịdị nke echiche doro anya na nke kachasị ya na-eme. Ya mere, maka ụkpụrụ ndị dị ogologo dị ka oge nke njedebe, oge amụma nke David Berg, nduzi nke nzukọ na ịchịkwa site na mkpughe ziri ezi, mmekọrịta obodo na ikerịta ihe niile na-emekọ ọnụ, inwe mmekọahụ dị ka ngosipụta nke Iwu nke ịhụnanya, ndị ozi ala ọzọ zuru oke, na ịhapụ ụwa na ụkpụrụ ịhụ ihe onwunwe n'anya, mgbanwe ndị na-esonụ nwere ike ịde.
(1) Ọhụụ nke abụọ Jizọs na-abịanụ abughizi nrụgide, ọ bụkwa n'eziokwu, a na-eme ka ọ laghachi azụ na oge a na-amaghị, nke na-enye ndị Kraịst kwere ekwe aka ilekwasị uche ha na ike ha na ihe omume, atụmatụ ogologo oge iji gbasaa ihe ọ bụla na-ezisa ozi ọma na ndụ ndị ọzọ - nke ha nwere ike itinye. Ngbanwe a nke ịtụ anya otu puku afọ bụ ma eleghị anya ihe kasị dị mkpa nke mgbanwe niile Reboot. E hiwere TFI ma mee ka o sie ike na "Oge Ọgwụgwụ" dị nso. Ndi otu ndi mmadu ndi ozo di ndu ga-eme otu ukpuru a, ma n'adịghi ka ndi ozo di iche iche, TFI, ruo ugbua, a raara onwe ya kpamkpam nye ndi ozo nke ndi ozi oge nile maka ndi ozo di ka "ndi agha". ọ siri ike ịkwado nraranye ozioma nile maka ndị niile nọ n'ọgbọ ọ bụla mgbe e nyere oge ha ga-eji rụzuo ozi ha site na ngwa ngwa na ngwa ngwa na amaghị ama na n'ọdịnihu.
(2) Ya mere, n'eziokwu, nraranye zuru oke nye ọrụ ozi ala ọzọ anaghịzi achọ; ọkwa nke ikwusa ozi ọma nke Kraist bu otu aka kpebisiri ike n'enweghi nyocha ma obu nlekota oru na nhazi.
(3) Ọ bụrụ na ndị na-asụ TFI dị ndụ site na ndị TFI n'ụwa niile, ọ fọrọ nke nta ka ha kwụsị, ndị TFI na / ma ọ bụ ezinụlọ ndị ha na nuklia na-agbasasị ugbu a, na iso ndị ọzọ na-akpakọrịta.
(4) Ntinye aka nke ndị òtù na mpaghara, akụ na ụba, na agụmakwụkwọ nke ụwa ụwa aghọwo ihe kachasị mkpa, ebe ndị òtù na-enweghị ike ịtụkwasị anya na ihe onwunwe dị mkpa nke sitere na arụkọ ọrụ ọnụ nke ndụ mmadụ.
(5) Ihe ndị Davidbles na Berg na-adabaghị na ọha mmadụ ekwupụtala n'ihu ọha; ọtụtụ n'ime ihe odide ya abụrụla ndị a na-atụgharị uche ma ọ bụghị na-ejikọta ya na ụfọdụ dị ka naanị echiche na ọbụna na-ezighị ezi. Ntụleghachi nke akwụkwọ Berg nile (nke bụ akwụkwọ MO) bụ ndị Maria na Pita na obere ìgwè nke ndị oche oche oche mbụ na-eme iji chọpụta ozizi ndị a weere dị ka "na-adịgide adịgide ma ọ bụ na-adịghị adịte aka" ya mere na ọ dị mma maka ihe ndị TFI nọgidere na-eme. Ihe a na-ede na Berg n'ozuzu ya bụ na ọtụtụ n'ime ya bụ "oge na-ekwu okwu," ya bụ, nke dabara adaba ma kwesị ekwesị naanị maka oge na ọnọdụ na-emetụta mgbe e dere ya. Mgbe ahụ, ọrụ ahụ bụ ịkọwa ozizi ndị kwekọrọ na nkwenye na nkwupụta nzuzo nke oge TFI (lee n'okpuru). Ihe ngwụcha nke nyocha a na-atụgharị anya ga-abụ ihe siri ike, ọ bụ nanị ole na ole narị amaokwu sụgharịrị site na Berg nke ihe odide dị egwu nke a ga-ejigide.
Ụfọdụ ndị ndú ugbu a mara Berg dị ka an Onye amụma oge ọgwụgwụ, ọ bụghị na Onye amụma oge ọgwụgwụ: onye amụma maka TFI ma ọ bụghị maka ụwa. N'adịghị iche, ụfọdụ ndị na-aga n'ihu na ndị okenye (FGA) na-ekwenyeghị na nchịkọta a ma na-ejigide Berg dị ka na Onye Amụma Oge Ikpeazụ na ihe ka ukwuu nke ozizi mmalite ya nke dọtara ha na Family na mbụ. Ma ọtụtụ ndị na-eto eto nke abụọ (SGAs) na-akwado nkwado nke amụma Berg.
(6) Iwu nke ịhụnanya na-aga n'ihu dị ka ụkpụrụ nduzi, akụkụ ime mmụọ ma ọ bụ nkà mmụta okpukpe nke mmekọahụ (dịka akụkụ nke iwu a) nọgidere dị ka ihe nkwenkwe kweere; ọ gaghị abụ na a ga-ajụ ha ma ọ bụrụhaala na Maria na Pita dị ndụ. Otú ọ dị, ọ dịwo anya a jụwo ihe ndị kasị egbuke egbuke nke mmekọahụ nke David Berg kwadoro. Enweghi ike ime ka nwoke ma obu nwanyi nwee ike ime ka ha buru ndi kwesiri ekwenye na ihe ndi kwesiri ekwenye, ma uzo ndi mmadu TFI na-abata. Na ichota ihe omimi nwoke na nwanyi ka ha bu ndi n'eme ka ha na Jisos ghara inwe mmekorita nke onwe ha adighizi akwado ha kama o bu ihe ndi mmadu choputara.
(7) Amụma na mkpughe bụ nke kachasị na ndị mmadụ n'otu n'otu maka nzube nke nduzi onwe onye kama ịbụ ndị isi ndị TFI na-enye dịka ntụziaka ndị ọchịchị na-ejide ndị niile na-eso ụzọ. Akwukwo nso kariri ihe ndi natara na ozi ndi amuma ndi sitere na World Services ka ekwusiri ike ugbu a. Ihe ndị mmadụ na-enwe ugbu a dị ka ozizi ndị ọzọ na Maria na Pita nwere ike ịnakwere, ma ọ bụ ọbụna dị ka e si n'ike mmụọ nsọ dee, ma a kaghị enye ha amụma amụma kwesịrị ekwesị dị na TFI niile.
Na nkenke, okwu TFI ugbu a nke nkwenkwe na okwukwe bụ n'ụzọ kwekọrọ na ọtụtụ ndị Kraịst na-ezisa ozi ọma n'oge a, karịsịa ndị nwere nhazi Pentikọstal. Ozi Nkwupụta nke kwekọrọ na ya dịkwa nnọọ mkpa ma mesie ike inweta enyemaka mmadụ na iji ịhụnanya na nzọpụta Chineke mee ihe n'iweta nkasi obi ime mmụọ n'ụwa. Ọ dịghị otu n'ime okwu ndị a na-akọwa TFI dịka onye ọbụla a họpụtara nke ọma n'ụzọ mmụọ site na nduzi nke ndị amụma, kpọmkwem na mmekọrịta ya na Jizọs, iji mee ka ọbịbịa nke ọbịbịa ya dị nso. Nkwado mmụta okpukpe na-akwado maka okwu ndị a bụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ nile; ọ dịghị nkuzi nke David Berg ma ọ bụ ozizi ndị sochiri na World Services n'okpuru Maria na Pita bụ ndị a kpọtụrụ aha ma ọ bụ ederede. A na-ekwupụta okwu ndị a na webpage nke TFI, ndị mmadụ na-atụle ndị òtù TFI ugbu a aghaghị ikwenye na ha ga-anabata ha (yana jikwa ọkwa "akụkọ" belata ma na-eme ụtụ ego). Ihe omuma TFI nile gara aga (site na akwụkwọ David Berg na afọ ndị ọzọ nke Oziọma (GN) amụma sitere n'aka Ọrụ Ụwa) ugbu a dị ka ozizi si n'ike mmụọ nsọ, nkuzi ndị ọzọ, ma ọ bụ bụrụ ndị a tụfuru kpamkpam. N'ọnọdụ niile, ha anaghị ejikọta ha kama ọ bụ ihe gbasara nhọrọ onye ọ bụla.
Na-aga n'ihu na ndị òtù TFI, ma ọ bụ dịka ndị mmadụ ma ọ bụ ndị òtù nke nuklia ma ọ bụ (ọ bụ ugbu a) ezinụlọ ndị ezinụlọ, na-agba ume ka ị nọgide na-ekere òkè n'omume ofufe TFI. Ndị a gụnyere ekpere mgbe niile; Ọmụmụ Bible na ịgụ akwụkwọ TFI mere akwụkwọ; nyocha na / ma ọ bụ ige ntị na TFI mepụtara egwu okpukpe na ụdị ndị ọzọ nke ntụrụndụ na ntụrụndụ na ihe mmụta; na-achọ nduzi ime mmụọ site ná mkpebi onwe onye site na mkpughe ma ọ bụ mkpali sitere n'aka onwe onye. Iso ndị ọzọ na TFI na-akpakọrịta mgbe nile bụ nhọrọ ma dabere na ịdị n'otu na mmasị onwe onye karịa iwu nhazi. Itinye aka na nzuko na ihe ndi ofufe ndi ozo di iche iche na-adi na ndi mmadu na ndi mmadu. Mgbe ihe ndị a na-eme, ha dị, dịka ọ dị mgbe ọ bụla, na-eme na ntọala ụlọ ezumike kama ịnọ n'ọnọdụ ebe a na-ahọpụta ha. Ụdị na ngụkọta mgbalị ndị ozioma na-abụghị ọrụ ndị ọzọ a na-arụ kwa ụbọchị na-ahapụ onye nwere ezi uche na akọnuche. Ndị òtù TFI, ma ugbu a ma ọ bụ n'ụzọ nkà na ụzụ (ntụgharị, ndị na-adịghị "na-akọ" ma na-enye onyinye ego mgbe niile site na ebe nrụọrụ weebụ naanị nke ndị ọzọ) nwere ike ịga ụka na chọọchị dị n'ógbè ha bi (a na-agbakwa ha ume ime nke a ). Dịka e kwuru n'elu, mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'etiti ndị òtù TFI na-abụghị di na nwunye abawanyela ntakịrị n'ihi ntụgharị a na-agbanwe na ndị nweere onwe ha, ndị a chụsasịrị, ndị ezinụlọ nuklia.
N'ihe gbasara Fall Fall, 2012, e nwere ihe dịka ndị òtù 3,600 TFI (dịka a na-atụle site na njide onwe onye na onyinye ego ha debere site na TFI na saịtị weebụ nanị), gbasaa na 90 mba dị iche iche gburugburu ụwa (ọ bụ ezie na ihe karịrị ọkara nke akụkọ ndị a ndi ozo di ugbu a na mba ndi odida anyanwu). Nọmba ndị a na-egosi 40% dobe na otu ebe kemgbe Reboot na 2009, mgbe a gụrụ ndị na-agụ 6,000 isi. N'ime ndị na-akọ akụkọ ugbu a, Ndị Na-eto Eto Mbụ (FGAs) bụ ndị buru ibu (ego a na-amaghị) karịa Ọgbọ Ọgbọ Abụọ (SGA) na Ọgbọ nke Atọ.
Ihe ndị chọrọ ugbu a dị ntakịrị. Otu ga-ekwupụta "site na ntinye ọnụ ụzọ nke TFI ma mee ka ego akwadoghị ma ọ bụ" otu ụzọ n'ụzọ iri. "Otu ga-egosikwa ịnakwere Nkwupụta Okwukwe TFI na nkwupụta TFI nke Mission. Enwetụbeghị nkwupụta bụ Nkwupụta nke Ụkpụrụ Nzuzo nke ndị òtù ga-achọkwa. Oge tupu ọgwụgwụ 2012, TFI ga-eme ka 70 pasent nke ụlọ ọrụ weebụ ya na-emeghe ka ọpụpụ; ihe fọdụrụ na 30 pasent nke ọdịnaya ya ka ga-achọ ka onye òtù maka ohere inweta.
Ihe onwunwe TFI, ego na n'ụzọ ọzọ, emewokwa ka ọnụ ala. Akuko ego nke July 2012 gosiputara na ego enwere ihe dika uzo ato n'ime afo gara aga, ego nke 2010-11 abawanyela karia. Ụfọdụ ndị òtù mbụ nke wepụrụ akụkọ na otu ụzọ n'ụzọ iri na TFI na-enye aka inye ego iji kwadoo ọrụ ozi ala ọzọ ma ọ bụ ọrụ enyemaka mmadụ na-arụsi ọrụ ike.
Obere nke usoro ochie nke ụwa na-anọgide na ebe. Ezigbo "Ọrụ" ezinụlọ (TFIS) bụ ihe ugbu a nwere ike ịsị na ọ bụ onye nduzi nzukọ ugbu a. N'oge ugbu a, Maria na Pita na-achọpụta onwe ha dị ka "ndị ndu" ma na-anọgide na-ebi n'ebe nzuzo, nke ndị ọrụ enyemaka na-enweghị enyemaka nyere aka. Ha na-emepụta nkọwa na-eche echiche ma na-emekarị nke a na-ekwu banyere ha na blogs website TFI, "Ebe Ndị Nduzi." Peter kwusiri ike na isiokwu ndị dị na nkọwa ya, nyocha na ihe gbasara ihe ndị ọ gụrụ, ma na-enyocha ozizi TFI. Maria na-ede banyere ahụmahụ ịgba àmà ya, na-enye ụfọdụ amụma amụma, na-aza ya mail, ma na-eme Skype na oku ibe oku na ndị òtù ya na ọ nwere ike ijikọ.
Nanị saịtị ndị ọzọ na saịtị TFI na-enye ozi TFI dị mkpa, na ọtụtụ ihe onwunwe dị maka ndị nọgidere na-amata TFI ma kwado ndị otu ha site na ụdị otu ụzọ n'ụzọ iri ma ọ bụ onyinye ego. Inyocha ndị otu ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye ọrụ ndị ozi ala ọzọ nke TFI site na mgbalị onye ọ bụla na-ekwusa ozi ọma na-eme ka ọ bụrụ ndị agbata obi nkịtị, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ, na ụmụ amaala nke mba ha bi. Otú ọ dị, mgbalị ha (na ihe ọ bụla nke mgbalị ndị a) anaghịzi arụ ọrụ ma ọ bụ dekọọ ya.
Ọrụ ụwa, ndị nchịkwa (International, Regional, na National), na Usoro Ntube Ezinụlọ niile na-ekpochapụ. Ndị mmadụ ole na ole, ndị ọrụ WS mbụ, bụ ndị a gbasaa gburugburu ụwa, nyere enyemaka akaaka iji kwado TFI dị ugbu a, na-ebelata ọrụ na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa site na nkwukọrịta na-arụ ọrụ dịka ndị ọrụ nyocha. Otu otu-Otu "WAC Team," otu komiti ndụmọdụ ndụmọdụ nke abụọ nke ndị okenye (SGAs), na-ejikwa TFI na-aga n'ihu Internet na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. Ihe mgbaru ọsọ nke ọtụtụ n'ime ndị ọrụ WAC ndị a bụ ịgbakwunye nghọta na ịnweta ihe omume TFI dị ugbu a ma n'ọdịnihu.
Nanị otu nzukọ na-arụ ọrụ site na ọchịchị oge ochie bụ Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihe Ọha, nke ndị isi oche TFI Board mere. Ha na-elekọta ma na-edozi ihe obere nchịkwa na azụmahịa ndị isi ka jikọtara na TFI, gụnyere Tinye n'ọrụ! Magazin na Aurora Productions. Aurora Productions na-aga n'ihu na-ekesa ma na-ekesa ihe dị iche iche nke ime mmụọ, ozi ọma, na agụmakwụkwọ (akwụkwọ, DVD, CD, akwụkwọ nkuzi, akwụkwọ akụkọ, kalenda, wdg) gburugburu ụwa.)
Ọrụ ntụgharị maka ma Tinye n'ọrụ! na ngwaahịa Aurora na-arụ ọrụ site na Ọha Ọha, dịka akụkọ sitere n'aka ndị òtù na onyinye ego site na weebụsaịtị na azịza nke arịrịọ / ajụjụ ndị na-agụ weebụsaịtị, ma ndị òtù ma ndị na-abụghị ndị òtù. Ndị oche PA na-eme ka akụkọ nke ọnwa na-eme maka Maria na Pita na, mgbe ụfọdụ, na-eme njem site na ebe dị iche iche gburugburu ụwa iji zukọta dị ka otu ìgwè na Maria na Peter maka mkparịta ụka banyere ọdịnihu TFI.
Ugbu a, blọọgụ Ozi Ọma, ọbịbịa nwere ike ịnweta naanị ndị òtù na-eguzo ọtọ na weebụsaịtị TFI, na-arụ ọrụ dịka ụlọ nkata ma ọ bụ ụdị obodo ọha mmadụ nwere ike ịkekọrịta echiche, echiche, mkpesa, na aro. Ndị dịka ndị 500 na-enye ohere a; a na-agwa ndị na-atụnye ndị a ka ha tinye "profaịlụ" nke onwe ha na ezinụlọ ha iji nye TFI ma ọ dịkarịa ala otu isi ihe ọmụma dị na ya. Ebe ọ bụ na Reboot, enweghị akwụkwọ ndekọ ihe omimi abụrụwo ihe siri ike maka atụmatụ na mkpebi ikpe na Ụlọ Ọrụ Ọha na eze (gụnyere Maria na Pita) ka na-aga n'ihu maka TFIS.
Ụlọ Ọrụ Nlekọta Ezinụlọ, nke dị na Southern California na nso ókèala Mexico, ka na-arụ ọrụ dịka ụwa dum ndi mmadu na-enye ndi mmadu aka oru ego, na ndi oru mmeghariri onwe ha, ndi isi na Southern California, ka ha na-aga n'ihu ka ha wee mezuo oru nke ndi okpukpe. Otutu ndi nke TFI ndi raara onwe ha akwapuola site na TFI ndi obodo ha na ndi otu nhazi ha iji na-eje ozi n'oru ndi mmadu a na-enyere ndi mmadu aka ka ha jiri aka ha, ihe omuma ha, na nzisa ozi oma. O doro anya na ndị a bụ otu agbụrụ nweere onwe ha nke mepụtara ma na-eduzi ụkpụrụ na usoro ndị a kwadoro na atụmatụ nke aka ha na njikwa ọrụ ma ghara ịrịọ ma ọ bụ ịnata ihu ọma na ntụziaka site na TFIS.
Peter emeela mmepụta nke vidiyo vidio ndị na-eche banyere nchegbu TFI ugbu a. Ndị a gụnyere ihe ndị chọrọ n'ọdịnihu; inye otu ụzọ n'ụzọ iri ma ọ bụ inye ego na iji ihe onwunwe eme ihe; ma ma ọ bụ [na otu] ị ga - esi guzobe "Ego Nlekọta Anya" maka ndị agadi FGA; mmekorita nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ na-ezigara onwe ha na nsọpụrụ nke alụmdi na nwunye; na mgbanwe ndị ọzọ na nkwenkwe na ozi. A na-eme ndokwa vidio maka ntọhapụ ndị òtù TFI n'ụzọ dị mma na mmalite ruo n'ọnwa Jenụwarị, 2013, ha ga-abịa site na ndokwa maka nkọwa, nzaghachi, na ịme ntuli maka mmasị maka ụdị dị iche iche nke TFI ga-agbaso.
TFI abụrụla otu ihe dị mkpa n'ọmụmụ banyere mmegharị okpukpe ọhụrụ nke sitere na ọha mmadụ dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa (cf, Davis na Richardson 1976; Wallis 1976, 1981; Van Zandt 1991; Lewis na Melton 1994; Chancellor 2000; Bainbridge 1997, 2002; Melton 2004; Na-azụ ma na-elekọta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Ọ bara uru maka ihe nyocha na akụkọ ihe mere eme iji chọpụta ụfọdụ isi akụkọ, akụkọ mmụta okpukpe, nzukọ na ọdịbendị nke na-apụta site n'ịtụle ọnya nke ọrụ TFI. A na-achịkọta ọtụtụ okwu dị otú a n'okpuru.
1. Kedu ihe bụ otu ihe kpatara mgbanwe mgbanwe nke TFI oge a ("Reboot")? Ịgbanwe mgbanwe na TFI, dịka e kwuru ọtụtụ ugboro na The Family International (1919-2009), na-eme tupu ọnwụ David Berg (dịka, ịkwụsị FFing, igbochi àgwà omume ndị na-anabata agụụ mmekọahụ na Ezinụlọ, karịsịa n'ihe gbasara ụmụaka obere; na nhazigharị nke nhịahụ ụmụaka na mkpa agụmakwụkwọ). Ndị a na-arịwanye elu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20 afọ ebe ọ bụ (dịka akwụkwọ nke Charter, Board Board, na ụlọọrụ ma ọ bụ amụma ọrụ otu, nke mere ka mmepe nke onye ọchịchị na-eme mkpebi ndị gụnyere ụmụ nwanyị na ndị na-eto eto n'ogologo ọ bụla nke TFI). Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, onye nduzi TFI ghọtara ma nwee nchekasị site na mbelata nke ịdọ aka ná ntị na nzube na Ụlọ Ezinụlọ site na njedebe 1990s. A hụrụ ụfọdụ n'ime ihe ndị a dị ka ihe si na nnyefe nnwere onwe dị ukwuu) na TFI ji nlezianya na mmezigharị ya na mmeghari ohuru nke mmalite 2000s. Otú ọ dị, mgbanwe ndị a na-agbanwe agbanwe, mesịrị ghọọ ndị na-abaghị uru, ha anọgideghịkwa na-eme ka ndị mmadụ kwụsịlata ọnọdụ ndị ahụ ruo ogologo oge.
N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ okpukpe (ma e wezụga iwu ndị mọnk na nke a na-etinye na mpi ma ọ bụ ndị nchụàjà), TFI bụ ụzọ ndụ ndị ozi ala ọzọ oge niile maka ndị òtù ezinụlọ na-achọ ka a na-agbaso usoro iwu na-egbochi, ọbụna n'ime ihe na-emeghe ma na-anabata omenala nke 2005 malitere. Ọtụtụ ndị mbụ na-eto eto ndị okenye (FGA) na-esiwanyewanye ọtụtụ afọ nke ọrụ a raara onwe ha nye. Ha enweghi ike ịga n'ihu na-azaghachi na njigide ebighi ebi nke mkpọsa ọhụụ ọhụrụ, usoro, na ihe ndị dị mkpa na-agbatị kwa afọ na ume na ịnụ ọkụ n'obi dị mkpa. Ha na-echegbu onwe ha gbasara atụmanya ha maka nlekọta ahụike na ihe ndị ọzọ na-eme ka ha dị nká, n'ihi na atụmanya maka oge ndị a na-echere oge na-aga, bụ nke meworo ka ha bụrụ ihe bụ isi ebumnobi maka ntinye aka ha na mbụ, yiri ka ọ ga-anọgide na-aga n'ihu n'ọdịnihu .
Ọtụtụ ndị na-eto eto nke Abụọ (SGAs) enweghị obere mmasị itinye ndụ ha niile n'ọtụtụ dị elu, n'ime otu ụdị ndụ ahụ, na maka otu ihe kpatara ndị mụrụ ha. SGA na-eto eto na iri afọ abụọ na-ahapụ TFI n'ọtụtụ ọnụ ọgụgụ karịa 50% tupu Reboot, ebe ndị SGA ndị ahụ nọgidere na-ekpuchi na njedebe ha ghọtara dịka ndị òtù FD na-aga n'ihu. Ọtụtụ ndị na-enwe nchekasị site na akụkọ mmalite nke TFI kwenyere na ọ bụ enweghị mmekọahụ na akụkụ ndị ọzọ na-adịghị mma nke oge David Berg nke na-esiwanye na Intanet. Ha chere na ihe ndị a mere n'oge gara aga ma chọpụta na otu ihe ahụ kpatara nsogbu dị ukwuu maka mgbalị izisa ozi ọma ha mgbe ha na-agbalị ịzụlite ihe omume banyere TFI n'oge gara aga. Imirikiti ndị mmadụ nwere ike ịbụ ndị ọganihu nke ọma n'ozi ọma dị ka akụkụ nke mgbakọ ọgbakọ nke ọgbakọ TFI n'oge a na - eme mkpọsa "mkpasu iwe" nke midNNXXs na omume nke obodo.
O yikarịrị ka ngwakọta nke mmụba nke nchịkwa nke onye kwuo uche na mkpebi mkpebi na ọkwa niile nke TFI na mmụba nke ndị na-eto eto, nke abụọ (na nke atọ) ndị okenye nọ na TFI na-achị achị na-eme ka usoro mmebi ahụ dịkwuo njọ. Nke a bụ n'ezie ihe ga-ekwe omume na WS n'onwe ya. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ ahụ bụ ndị na-eto eto, ọgbọ nke abụọ ndị toro eto nwere ezi uche nke onwe ha na echiche siri ike bụ ndị metụtara oke mmepụta nke ozi amụma ndị ghọrọ iwu TFI.
Ya mere, Reboot bụ n'ezie ngosipụta ihu ọha n'ihu ọha nke usoro usoro mgbanwe nke na-emetụta na TFI ruo ọtụtụ afọ na nzaghachi nye ọtụtụ nsogbu dị n'ime na nke mpụga. Mgbanwe ndị na-emesapụ aka na mbụ maka ụdị nke ndị kwere ekwe maka ọkwa dịgasị iche iche (ntụgharị, MM ma ọ bụ ndị ozi ala ọzọ na ndị FM ma ọ bụ ndị òtù ezinụlọ) na-ese onyinyo ndokwa dị ndụ ugbu a, ibi ndụ, na ọkwa ndị dị ugbu a kachasị n'etiti ndị òtù TFI.
2. Kedu ihe bụ akụkọ gbasara TFI na isi ndu ya? O doro anya na TFI, karịsịa ebe ọ bụ na ọnwụ David Berg na 1994, rụzuru ọtụtụ ihe ọma na ụwa site n'ịgbasi mbọ ike na nnukwu ọganihu nke na-eweta ihe ndị dị mkpa, nkasi obi ime mmụọ, enyemaka ọdachi, na ohere mmụta maka ọtụtụ iri ọtụtụ puku mmadụ n'ụwa nile. N'ụzọ dị nkenke, Aurora Productions kere ma kesaa ọtụtụ egwú, akwụkwọ, vidiyo, na ngwaahịa mmụta (nke bụ nke na-abụghị ndị na-ekwenyeghị na ya) n'ime ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke na-emetụta ndụ nke iri puku ndị ọzọ. N'ime omenala na mmekọrịta mmadụ na TFI kwa otu, a na-enye ọtụtụ puku ndị ọrụ ohere iji mee ka ha nwee ike ịkụ egwú ha, ndị na-arụ ọrụ, ndị ndú, na nkà na ụzụ.
N'otu oge ahụ, a ghaghị icheta akụkụ ọjọọ nke ndụ TFI, karịsịa maka SGA n'oge afọ Berg. Maria na Pita kwadoro n'ihu ọha na ịrịọ mgbaghara maka mmejọ (mmekọahụ na nke ọzọ) nke mere n'ụlọ ọtụtụ ezinụlọ n'oge njedebe-1970 site na ọtụtụ n'ime 1980s ma kwalite maka mgbanwe ndị kwụsịrị mmejọ ndị a. Ụdị Flirty Fishing oge mbụ (FFing) adịghị adaba na ịzụlite ọtụtụ ụmụaka n'ime ezinụlọ, ọ bụ ezie na a rụrụ ya n'ọtụtụ buru ibu maka oge dị mkpirikpi, mepụtara ihe na-enweghị atụ nke mmekọahụ rụrụ arụ nke metụrụ TFI aka kemgbe ahụ.
David Berg bu oru maka iwebata na agbamume ihe omuma na ihe omuma nke nwanyi na TFI, nke a ga-abanyekwa na ya n'agbanyeghi ihe ozo, nke oma, ma oburu na ndi ozo ndi TFI. Ugbu a, ọtụtụ SGA nwere mmetụta dị egwu banyere "Nna David." Ha nwere ike inwe obi ike na ịhapụ nzukọ okpukpe na nke ọha na eze ka ha bụrụ ndị na-agbagha agbagha nke Ndị Kraịst, mana nsogbu esemokwu na nsogbu ụmụaka na-eme ka ha kwụsị. Ha adịghị amasị ịbụ ndị a na-eme ka ha bụrụ ndị isi nke "òtù nzuzo nwoke na nwaanyị," ha achọghị ka Berg pụta ìhè na ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu TFI nke nkwenkwe na ozi ya. Nzaghachi nyocha site n'aka ndị nọ ugbu a na-eguzo ọtọ (karịsịa SGAs) na-egosi na nkwenkwe mmekọahụ oge mbụ, mgbe a kwadoro ma ọ bụ kwadoro, adịghị "amị ezi mkpụrụ." Ozizi ndị a, na ihe oyiyi ochie ha na-ejikọta (nke a na-ezo aka na TFI dịka "ihe nketa okwu ") na-eche dịka ihe mgbochi siri ike maka ịkwusa ozi ọma na akụkụ ndị ọzọ nke ozi TFI.
Ndị òtù TFI ndị na-enweghị obi ọjọọ na ndị ọzọ na-akatọ ha ogologo oge ebubo ebubo na Maria na Pita (nakwa ndị ndú ndị ọzọ nke WS) na-ekwu ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ndị ikpe ezighị ezi na mbụ na TFI. Ma mwakpo ndị a adalatalarị n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya. Eziokwu doro anya bụ na ebe ọ bụ na Maria na Pita ghọrọ ndị isi na TFI na 1994, ha na-akwado ma na-eduzi ụkpụrụ TFI maka ịba ụba, imeghe, na onye na-akwado ọchịchị onye kwuo uche ya maka ndị otu n'otu. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ndị ụfọdụ ndị òtù mbụ na-akatọ ha ugbu a dịka ndị na-emesapụ aka, na-abanyekwa, na ndị na-ahụ maka njedebe nke ochie ahụ, TFI dịka ụzụ, dịka ọhụụ, Ọgwụgwụ Oge Agha.
3. Kedu ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu maka TFI dịka nzukọ okpukpe dị ike? Ịhapụ kpamkpam nke ụlọ ọrụ TFI na ụlọ obibi ndị mmadụ, na onye na-elekọta ya ka ọ ghara ịchọta iwu na nlekota nke ndụ ndị otu na ọganihu ngwa ngwa nke ụlọ obibi ego, na-anọgide na-agbagwoju anya ma ọ bụrụ na ọ bụghị imebi ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ndị òtù TFI. Ọtụtụ ndị agadi, ndị kwesịrị ntụkwasị obi na ndị mbụ na-akpabu ndị òtù mbụ juru anya ma gbaa mgbagwoju anya na ịdị omimi nke mgbanwe ndị a. Ugbu a, ọnụ ọgụgụ na-egosipụta nhụsianya na obi ilu maka ọnwụ nke Ezinụlọ ha mara ma kwado (ma kwadoro ya) maka ọtụtụ ndụ ha. Ụfọdụ na-alụ ọgụ ugbu a ịchọta ọrụ zuru oke ma mee ndokwa nke onwe ha n'otu oge mgbe afọ ha na enweghị ọrụ ego ha na-enweta na-emetụta ha. Ụfọdụ ndị òtù TFI ndị na-anọgide na-anọgide na-aga n'ihu na ụdị ọrụ mgbasa ozi na ozi ọma agaghị egosiputa n'ụzọ doro anya ihe ha na-eme gbasara TFI kwa otu, n'ihi na ha ahụwo na ndị ha na-arụkọ ọrụ nwere ike ịga na ntanetị ma chọpụta ihe niile ozi na-ezighi ezi banyere ezinụlọ ochie na ụmụ nke Chineke.
Onye ndu TFI na-ekweta na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ka na-arụ ọrụ ụlọ. Imirikiti ndị mmadụ na-echegbu onwe ha site n'ichegharị na izute ihe ndị ụwa chọrọ ụwa ma na-edozi ndụ ha dị nnọọ nta karịa mgbalị ndị evangelical karịa ka ha na-emebu. Nchoputa nyochaa ntanetị na-egosi na ọtụtụ SGA na-eche na TFI abaghịzi uru na ha, ugbu a na ọbịbịa obodo na-agakwaghị agụ akwụkwọ maka ụmụ ha anaghịzi enye ya (ọ bụrụ na otu onye ọlụlụ na-aghọ nne na nna na-anọ n'ụlọ). A naghị azụlite ma ọ bụ zụọ ọtụtụ ụmụaka nke atọ na-eto eto ka ha bụrụ ndị ozi ala ọzọ. Ndị isi TFI ndị a na-achọpụta na ọ dị ha mkpa ịdọta nnukwu ìgwè nke ndị ọhụrụ site na mpụga ha dị ugbu a iji kwado ọkwá ndị ozi ala ọzọ ha. Ha na-enwe olileanya na ịkọwa isi nke Ndị Kraịst na ozi ha na ozi ha ma ọ bụrụ na ha ajụ ma ọ bụ ịhapụ onwe ha site n'inwekwu ọdịiche na ihe ndị na-adịghị mma nke oge gara aga ga-adọta ndị na-ege ntị n'ozuzu ha. Otu onye na-eme ugbu a ekwuola na ị ga-agbanwe aha TFI ka ị kwaga n'ihu site na mkpakọrịta ọjọọ. Site n'ibelata nhazi nke nzukọ na nke kachasị nta, ndị mmadụ dọtara mmasị n'ọrụ ha bụ ndị guzoberelarị ụlọ, ezinụlọ, na ọrụ (ma ọ bụ ndị na-achọ inweta ha) nwere ike inyefe ụfọdụ akụkụ nke oge ha na mgbalị ha n'inwe na imezu akụkụ dị iche iche nke ozi TFI. Otú ọ dị, ndị isi na-ekwukwa na mmepe TFI maka otu abụghị ihe mgbaru ọsọ, ma ikwusa ozi ọma bụ ụwa; ịbụ onye so na TFI adịghịzi mkpa, mana ịbụ Onye Kraịst a zọpụtara dị oké mkpa.
N'ọtụtụ ụzọ, TFI aghọwo netwọk na-ejikọtaghị nke ndị otu onwe ha na ndị n'otu n'otu, na Family International Services (TFIS) na-akwalite ma na-akwado ọrụ ha. Nsonaazụ bụ ihe amorphous nke ọma na obodo karịa palpable, anụ ahụ. Nzuzo bu isi site na ntanetakorita n'igwe kama ikpogide ihu na ihu, ma ndi mmadu na-eme mkpebi di iche iche karia nhazi oru. Ụfọdụ ndị ndú na-akọwapụta ihe a dị ka "ọchịchị onye kwuo uche ya na-eme ka ọ bụrụ ọchịchị." Ma usoro ochichi nke nduzi nke nduzi nke nduzi nke nduzi, nke na-enweghi njirimara nhazi nke doro anya nke na-ebute iwu ma tinye iwu, ga-ezu iji kwenye na ndụ TFI dị ogologo oge. aguu nduzi-ma obu ihe ojoo - na-adi, n'ezie, ka a huru ya.
TFI anọwo na-echekwa na ọ ga-anọgide, n'agbanyeghị ọnụọgụgụ na ọnụ ọgụgụ na-ebelata, obodo okwukwe nwere na nkwenye na nduzi amụma. Ọ bụ ezie na ndị isi ugbu a na-ele ya anya dị ka ihe na-adịghị emetụ, ọ bụghị ihe a na-apụghị ikwenye ekwenye na n'ikpeazụ nkwupụta amụma ọhụrụ nwere ike ịpụta ọzọ iji mee ka ndị kwere ekwe na-ekwenye ekwenye na ha ga-eme onwe ha ọzọ na-arụ ọrụ ozi ala ọzọ ahaziri na nke a na-ahazi. Ma ọ bụ ma eleghị anya ihe dị ugbu a, ụdị mmadụ iche iche nke ịkwusa ozi ọma nke azụmahịa, nke a na-ejikọtaghị ma jikọta ya site na nkwurịta okwu TFI ugbu a, ga-enwe ihe ịga nke ọma n'ịkwado ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ozi ala ọzọ a raara onwe ha nye. N'ikpeazụ, TFI nwere ike ịnwụ ma laa n'iyi kpamkpam dị ka ụlọ ọrụ nhazi. Ọdịnihu nke ezinụlọ agaghị ejide n'aka ma ọhụụ ya ga-anọgide na-enwe mmasị dị ukwuu nye ụmụ akwụkwọ nke mmegharị okpukpe ọhụrụ.
Bainbridge, William Sims. 2002. Ezinụlọ Ezinụlọ Ezigbo Oge. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
Bainbridge, William Sims. 1997. The Socialism of New New Religions. Albany, NY: University University of New York Press.
Chancellor, James D. 2000. Ndụ n'ime Ezinụlọ: Akụkọ Oral nke Ụmụ Chineke. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
Davis, Rex na James T. Richardson. 1976. "Òtù Na Ọrụ nke Ụmụ Chineke." Nyocha gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, 37: 321-39.
Lewis, James R. na J. Gordon Melton. 1994. Mmekọahụ, Nkwutọ na Nzọpụta: Ịchọgharị Ezinụlọ / Ụmụ Chineke. Stanford, CA: Center for Academic Publication.
Melton, J. Gordon J. 2004. Ụmụ Chineke: "Ezinụlọ." Salt Lake City, UT: Signature Press.
Onye Ọzụzụ Atụrụ, Gordon na Gary Shepherd. 2012. "Nnyocha nyocha." Nchịkọta dị na profaịlụ a dabere na ozi anata na websapụ TFI, site na mkparịta ụka ya na ndị otu TFI mbụ na nke ugbu a, yana site na ajụjụ ọnụ nke ndị òtù TFI Public Affairs Board ugbu a.
Onye ọzụzụ atụrụ, Gordon na Gary Shepherd. 2010. Ikwurita Ụmụ Chineke: Amụma na Ngbanwe na Otu Okpukpe Okpukpe. Urbana: Mahadum nke Illinois Press.
Onye ọzụzụ atụrụ, Gordon na Gary Shepherd. 2009a. "Ụzọ Amụma na Ụkpụrụ Amụma: Nkọwa nke Mkpughe na Family International na Chọọchị LDS. "Journal for the Scientific Study of Religion 48: 734-55.
Onye ọzụzụ atụrụ, Gordon na Gary Shepherd. 2009b. "Ọrụ ụwa na Ezinụlọ Ezinụlọ: Òtù Na-ahụ Maka Òtù Na-ahụ Maka Okpukpe Ndị Na-eto Eto." Nova Religio 12: 5-39.
Onye ọzụzụ atụrụ, Gordon na Gary Shepherd. 2008. "Evolution of Family Family / Children of God in Direction of a Responsive Communism Religion". Ọha obodo 28: 27-54.
Onye ọzụzụ atụrụ, Gordon na Gary Shepherd. 2007. "Ụkpụrụ Edebe Ebube n'Afọ Ezinụlọ." Nova Religio 11: 38-71.
Onye ọzụzụ atụrụ, Gordon na Gary Shepherd. 2006. "Ezinụlọ Ezinụlọ: Ọmụmụ Ihe gbasara Management nke Change na New Movements." Ogbago okpukpe 11: 1-16.
Onye ọzụzụ atụrụ, Gary na Gordon Shepherd. 2005. "Ezinụlọ na Ndozigharị na Ezinụlọ / Ụmụ Chineke. "Nova Religio 9: 67-92.
Stark, Rodney. 1999. "Akwụkwọ nke Mkpughe." Akwụkwọ akụkọ maka Ọmụmụ Sayensị nke Okpukpe. 38: 287-308.
Wallis, Roy. 1981. "Ụmụ ụnyaahụ: Ngbanwe nke ọdịbendị na nke iwu na-agbanwe n'okpukpe ọhụrụ." Pp. 97-132 na Mmetụta Mgbasa Ọhụụ nke Ọhụụ Ọhụrụ, nke Bryan Wilson dere. New York: Rose nke Sharon Press.
Wallis, Roy. 1976. "Ihe E Kwuru Banyere Ụmụ Chineke." Nyochaa mmekọrịta ọha na eze 24: 807-29.
Weber, Max. 1978. Economy na Society: Otu ihe atụ nke usoro mmekọrịta ọha na eze. Edited by Guenther Ross and Claus Wittich. Berkeley, California: Mahadum California Press.
Van Zandt, David E. 1991. Ibi n'ime umu nke Chineke. Princeton, NJ: Mahadum Princeton University.
Zerby, Karen (Maria) na Steven Kelly (Peter). 2009. "Ọdịnihu nke Ezinụlọ International." Akwụkwọ e bipụtara na Ụlọ Nzukọ Maka Ọmụmụ nke Ọhụrụ (CESNUR) ogbako kwa afọ na Salt Lake City, Utah. June 11-13, 2009.